laacib » XASAASI: Van Gaal oo ka hadlay Musiibada Rooney ka heysata Garoonka Liverpool iyo Horyaal la’aan Reds-ka.
XASAASI: Van Gaal oo ka hadlay Musiibada Rooney ka heysata Garoonka Liverpool iyo Horyaal la’aan Reds-ka.
Tababaraha laacibkii Manchester United Louis van Gaal “ayaa sheegay inuusan qiyaasi karin waqtiga ay abaarta kob la,aanta ka baxeyso laacibkii Manchester United.
Lakiin waxa uu sheegay in laacibkii United aysan 26 sano aysan ku qadan doonin abaartaasi inay soo gabagabeyso.
United ayaa muddo badan horyaalka qadeysay waayihii Sir Alex Ferguson tan iyo sanadkii 1993, Liverpool ayaana mudadaasi wax koob ah ku guuleysan ,tasoo keentay in Van Gaal uu kusoo hal qabsado isagoo yiri abaar lamd ah tan Liverpool ma qadan doono,
Ma qiyaasi kartit waxa dhici doona,” ayuu yiri Van Gaal. “Anaga waxaan ku kala duwanahay fikirka, laakiin waxaan leenahay socod wanaagsan lama mid ahaan doono laacibkii Liverpool.”
Liverpool iyo United ayaa isku wajihi doonaa Axada beri ah kulan katirsan Premier League garoonka Anfield.
Kooxda Van Gaal ayaa badisay dhamaan seddexdii kulan ee tartan rasmi ah oo ay wajaheen Liverpool, waxaana kujiray guuldaradii Anfield ee xilli ciyaareedkii hore,
Laakiin hal guul kaliya ayay gaareen sideedii kulan ee Premier League ugu dambeeyay United oo kujirta kaalinta lixaad, saddex dhibcood ayay ka dambeeyaan koxda martida ay u ahana doonan ee lIverpool oo aan ku guuleysan Horyaalka tan iyo 1989-90.
“Weli Waxaan dhihi karnaa waxaan uga awood badanahay dhinac kastaa laacibkii LIverpool, sababtoo ah Manchester United waxay kaalin wanaagsan ku leheyd Premier League sadex sano ka hor,” ayuu yiri Van Gaal. “oo ku celi celiyay inana lala mid dhigin laacibkii Liverpool,
Waxa uu sidoo kale uu sheegay dhamaan taageerayaasha laacibkii in la taageero kabtanka laacibkii Wayne Rooney kasoo doonaya inuu hagaajiyo rikoorkiisa liita ee ka dhanka ah laacibkii Liverpool,
Waxa uu dhaliyay kaliya hal gool 10 toddobaad oo kaoso bilaawaneysa17 October, Rooney ayaa dhaliyay afar gool seddexdii kulan ee la soo dhaafay, waxaana kujiray laba gool oo uu ka dhaliyay kulankii 3-3 ay la galeen laacibkii Newcastle 12 January.
Laakiin tan iyo bishii March 2012 ma dhalin goolal afar kulan oo isku xigta oo uu ciyaaray kooxdiisa,
Xididgan 30-sano jirka ayaa guud ahaan ku dhibtooday kulamadii uu ku ciyaaray garoonka Anfield, hal gool ayuu dhaliyay 10-kii booqasho ee ugu dambeeyay,
“Wayne ayaa ku dhaw inuu jabiyo rikoorka gool dhalin ee Manchester Uniteed, ayuu yiri Van Gaal. “.
“Marka, waxa ay taasi u fududeyn kara inuu goolal dhaliyaa markastaa waana inaad taageertaan dhamaantiin ayuu yiri Van Gaal,